I-Flat 20m iphelele phakathi nendawo Div w/ garaji 301
Divinópolis , Minas Gerais, i-Brazil
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Victor
Ifanele abantu abangafika kwabangu-3 01 umbhede ophindwe kabili nombhede ongashadile ongu-01. Inendlu yokugezela yangasese, iwindi lomgwaqo, ifeni yophahla, ifriji, imicrowave, umenzi wekhofi kagesi, ikhabethe lezingubo, itafula kanye no-32” Smart TV w/ Netflix. Indawo yokupaka ekhaviwe ifakiwe.
Ihhotela Lokuqala Nelodwa Elihlukile eDivinópolis! I-Savassi iyindawo esezingeni eliphezulu enkabeni yedolobha, lapho kutholakala khona amabha, izindawo zokudlela kanye nama-snack angcono kakhulu. Kukhona ukunyakaza amahora angu-24 ngosuku, okwenza kuphephe kakhulu ukuhlala nokupaka lapha. Futhi siseduze nezitolo ezinkulu, amakhemisi kanye nezitolo ezihamba phambili edolobheni.
4.42(26 okushiwo abanye)
4.42 · 26 okushiwo abanye
Indawo ematasa, enamabha nezindawo zokudlela ezihamba phambili.
Hlola ezinye izinketho ezise- Divinópolis namaphethelo